Misioka momba ireo fomban-drazana miavaka ao Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2018 4:50 GMT
Saribakoly Jizo namboarina sy nolokoina nataon-tanana ao Obama, prefektioran'i Fukui. Sary avy amin'i Nevin Thompson.
Raha toa ianao ka liana te hahafantatra bebe kokoa momba ny sasany amin'ireo fomban-drazana taloha be tany Japana, vakio ny kaonty Twitter Unusual Festivals of Japan Club, (na ‘KFC’ raha hafohezina, ny ‘K’ dia fanafohezana midika hoe 奇 祭, kisai, na ‘tsy mahazatra’). Mandefa sioka imbetsaka isan'andro ny KFC, mandrakitra momba ireo fomba nentim-paharazana teo an-toerana tany Japana, izay efa maherin'ny arivo taona ny sasany amin'izy ireo.
Isaky ny 20 septambra, manatontosa ny fetibe ‘Okuma Kabuto’ ny toerana masina Kumakabuto Arakashihiko ao Nanao, Ishikawa. Toerana masina azo entin-tanana milanja 1 taonina miaraka amin'ny andry 20 metatra antsoina hoe orsa ‘wakuhato’ Sarutahiko Okami (iray amin'ireo ‘kami lehibe enina’ amin'ny Shinto). Ny zava-nisongadina tamin'io andro io dia ny fijerena ireo orsan'ny toerana masina mirohotra eny an-tendrombohitra mba hamoaka ilay andriamanitra ao amin'ny efitra lehibe indrindra amin'ny toerana masina.
Fetibe iray hafa ny fankalazana ny Sugawara no Michizane, andriamanitra mitoetra ao Tenman-gu, toerana masina iombonana hita ao amin'ny faritra maro ao Japana. Tao amin'ity toerana avaratr'i Japana ity, mahatsiaro an'i Sugawara no Michizane amin'ny alalan'ny fisotroana misaron-tava ireo mpandray anjara amin'ny fetibe:
‘Fetim-Biby” Yamagata (Bakemono no Matsuri, 25 Mey isan-taona): Fetibe Sugawara no Michizane, toerana masina Tenman ao Tsuruoka, prefektioran'i Yamagata. Taorian'ny fandraràna an'i Sugawara no Michizane (taorian'ny didim-pitsaran'ny fitsarana teo amin'ny 1000 taona lasa izay), voalaza fa novain'ny mpanara-dia azy ny endrik'izy ireo rehefa niara-nisotro, natahotra ny ampifandraisina taminy. Amin'ity fetibe ity, misotro sake mangingina na zava-pisotro mangatsiatsiaka no sady mandihy ireo mpandray anjara.
Ny tranonkala Green Shinto, loharanom-baovao mahazatra hatrany momba ny vako-drazana nentim-paharazana Japoney, manazava izay mitranga mandritra ny fizotran'ny fetibe:
Efa taloha be ny sasany amin'ireo fetibe asongadin'ny KFC. Ity fetibe ity any amin'ny faritanin'i Nara atsimo ity dia efa mihoatra ny arivo taona ary mifandray amin'ny vavaka an-tendrombohitra ao amin'ny faritra.
Fetiben'ny Nara Fitsambikinan'ny Sahona (kaeru tobi), 7 Jolay: Iray amin'ireo hetsika maro fanao isan-taona ho fankalazana ny fombam-pivavahana rengekai isan-taona ao amin'ny tempolin'i Kimpusen ao Nara. Nisy lehilahy nanendrikendrika andriamanitra iray teo an-toerana, ary vokatr'izany, nisy voromahery lehibe nanantona azy teo an-tampon'ny tendrombohitra. Rehefa nahita ilay lehilahy sy namindra fo taminy, nanova azy ho sahona ny pretran'ny tempolin'i Kinpusen mba hahafahany midina ny harambato ary hiverina eny amin'ny olombelona indray.
Manasongadina ireo fomban-drazana malaza any ambanivohitr'i Japana, toy ny “bull sumo” na tolon'omby ny kaonty Twitter KFC.
Nanjavona hatramin'ny fiafaran'ny Ady Lehibe Faharoa ity fomba fanao ity, saingy manome tontolo mahaliana momba ny hachiji i Lex McClellan, izay manoratra ao amin'ny Medium.
Fomba amam-panao hafa eny amin'ny faritra asehoan'ny kaonty KFC ny fomba fanaon'ny Yomeburi, izay mitranga any amin'ny morontsirak'i Japana, any amin'izay toerana rehetra ahatrarana buri, trondro hohanina mahazatra mandritra ny ririnina any Japana. Ny sary ao anaty sioka dia avy amin'ny sarimiaina manga sy ny andian-tsarimiaina Zazavavin-drano ny vady ampakariko (瀬戸の花嫁).
Mandefa imbetsaka momba ny vakodrazana [rehefa vakoka fa tsy hoe hira ihany] Japoney isan'andro ny kaonty Twitter KFC. Raha amin'ny teny Japoney matetika ireo sioka, ny sary ihany no manome topi-maso mahavariana momba ny fiainana Japoney.
5 andro izayAfrika Mainty